Izindaba - 2018 Guangdong Trade Exhibition.
UMbukiso we-123 wase-China wokungenisa nokuthumela ngaphandle ngo-2018 (ngemuva kwalokhu obizwa ngokuthi i-2018 spring Canton Fair) uzobanjwa ngezigaba ezintathu. Isikhathi sokuvula sisuka mhla zi-5 kuMbasa kuya kumhla zi-5 kuNhlaba wezi-2018 e-Guangzhou, futhi isigaba ngasinye sithatha izinsuku ezinhlanu. I-Canton Fair izoba sePazhou Pavilion.
I-Guangzhou Pazhou Exhibition Hall ivulwe ngokwesiko. Njenge-"barometer" kanye "ne-wind vane" yohwebo lwangaphandle lwaseShayina, i-Canton Fair iheha amakhasimende avela emazweni angaphezu kuka-200 nezifunda emhlabeni wonke ukuthi ahlangane e-Guangzhou minyaka yonke ukuze ashintshisane ngebhizinisi futhi athuthukise ubungane. Waziwa ngokuthi "umbukiso wokuqala waseChina".
Isigaba sokuqala se-2018 spring Canton Fair: Ephreli 15-19
Izindawo zombukiso zihlanganisa izinto zasendlini, izinto ezithengwayo zikagesi, imikhiqizo kagesi nekagesi, imikhiqizo yekhompyutha nezokuxhumana, imishini emikhulu nemishini, imishini emincane, ihadiwe, amathuluzi, amabhayisikili, izithuthuthu, izingxenye zezimoto, izinto zokwakha nezokuhlobisa, izinsiza zenhlanzeko, imikhiqizo yokukhanyisa, imikhiqizo yamakhemikhali, izimoto (ngaphandle), imishini yobunjiniyela (ngaphandle), indawo yokubukisa yokungenisa, njll.
Isigaba sesibili se-2018 spring Canton Fair: Ephreli 23-27
Bonisa izinto zasekhishini, izinto zobumba zansuku zonke, izinto zobumba ezenziwe ngezandla, okokuhlobisa ikhaya, imisebenzi yezandla yengilazi, izinto zomkhosi, amathoyizi, izipho nezipho, amawashi, izibuko, izinto zasendlini, izinto ezisetshenziswayo zokunakekela umuntu, izinto zokugezela, ubuciko bokuluka kanye nensimbi ye-rattan, ifenisha, imikhiqizo yasengadini, imikhiqizo yensimbi namatshe (ngaphandle) nezinye izindawo zokubukisa.
Isigaba sesithathu se-2018 spring Canton Fair sisuka ngoMeyi 1 kuya kuMeyi 5
Indawo yombukiso ihlanganisa okokugqoka kwabesilisa nabesifazane, izingubo zangaphansi, ezemidlalo nokungcebeleka, okokugqoka kwezingane, izesekeli zezimpahla zokugqoka kanye nezinsiza, uboya, isikhumba, phansi nemikhiqizo, impahla eluhlaza nezindwangu, izicathulo, izikhwama, okhaphethi nezindwangu, izindwangu zasendlini, ihhovisi. izinto zokubhala, imikhiqizo yasendaweni, ukudla, imithi kanye nemikhiqizo yokunakekelwa kwempilo, okokusebenza kwezokwelapha, okudlekayo, okokugqoka, ezemidlalo kanye nemikhiqizo yokungcebeleka yezokuvakasha, njll.
I-Weihai Ruiyang Boat ibonise imikhiqizo eminingana embukisweni, okuhlanganisa ibhodi lokugwedla le-SUP, isikebhe esiphefumulayo, isikebhe sokudoba esisodwa kanye ne-Kayak, njll. ukubukeka embukisweni, imikhiqizo yethu enqubweni yokuthuthukiswa inaka kakhulu ikhwalithi yomkhiqizo, ukuze inikeze amakhasimende ulwazi olungcono.
Ukukhangwa inqwaba consulter stop ukubukela umbukiso, abasebenzi bethu baphendula ngokucophelela consultant ngamunye unokungabaza, futhi ukwethula ukusetshenziswa, ukwenza consultant can ngokujulile ukuqonda imikhiqizo yethu, siyaqonda amabhizinisi embonini inzuzo fair, ukubona ukuthuthukiswa kwezimboni ezifanele.
Kuyinjabulo yethu ukuya embukisweni waseCanton, singakwazi ngale nkundla, ukuba nethuba lokwethula imikhiqizo yethu kubo bonke abantu, sazise wonke umuntu ngenkampani yethu, baqonde imikhiqizo yethu, ikusasa sizomosha izikebhe zaseYang zizovuthwa kakhulu. kanye nesimo sengqondo sobungcweti, ukuhlinzeka ngemikhiqizo engcono nekhwalithi eyengeziwe embonini yezikebhe, embonini yezikebhe esikhathini esizayo.
Isikhathi sokuthumela: May-26-2018